Alexandra Pereira: Saamayn, mood iyo dhiirigelin. - Hanukeii
En Hanukeii waxaa maalin walba nagu dhiirrigeliya hab -nololeedka iyo isbeddellada moodada ee lagu soo rogay kanaallada isgaarsiinta ee kala duwan. Dhowr sano ka hor, helitaankeenna saameynta weyn ee dharka iyo aaladaha alaabada ayaa la socday filimaan shaashadda weyn ama bandhigyada telefishanka. Hadda, oo ay ugu mahadcelinayaan qulqulka weyn iyo fiditaanka shabakadaha bulshada, saamaynta moodada ee shabakadaha bulshada ayaa ah mid ka mid ah tixraacyada ugu waaweyn ee inta badan la tixgeliyo ka hor inta aan la qaadin tallaabada weyn ee lagu abuurayo ururinta.
Markan, waxaan go'aansannay inaan lafagurno qaab -dhismeedka iyo taariikhda haweeney Galley ah, oo ahayd tii dareenkeenna soo jiidatay. Waxaan ka hadleynaa Alexandra Pereira, ama @LovelyPepa, sida qaar badanaa u yaqaaniin: Gabadh yar oo fudud oo xamaasad leh moodada, oo iska fogeysay adduunka sharciyada, qawaaniinta iyo dheelitirka maaliyadeed, si ay tallaabo ugu qaaddo wixii waqtigaas u ekaa adduun aan gebi ahaanba la aqoon, bloggers.
Hayso baloogga moodada. Yaa u malayn doona inay tahay fikrad wanaagsan? Waa hagaag waxay ku leeyihiin halkaas haddii aadan isku dayin waligaa ma ogaan doontid. Runtu waxay tahay wixii yaraa ku bilaabmay joornaal halkaas oo aan ku daabacay sawir ay ku jiraan miirayaashii hore ee Instagram, kuwa dib noogu celinaya 2010 halkaas oo midabada cagaarka ah ee cagaaran iyo muraayadaha ay ahaayeen kuwa ugu sarreeya xilligan, waa maanta mid ka mid ah websaydhada loogu booqashada badan yahay.
Daabacaadda shabakadaha qaabkan iyo qoraaga qaab -dhismeedku waa qiyaastii 5.000 euro iyo qandaraasyo go'an oo lala galay sumcadaha sida Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Cartier iyo kuwo kale, waxay gaaraan lacag aan la malayn karin. Millennial -ka oo leh baloog sannadle ah oo qaata 2.500.000 milyan oo booqashooyin bille ah, Alexandra Pereira waxay isu muujisay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu saamaynta badan fashion -ka Yurub, oo ay weheliso Chiara Ferragni iyo Aida Domenech (Dulceida).
Wuxuu bartay Sharciga iyo Dhaqaalaha Jaamacadda Vigo, Galicia. Si kastaba ha noqotee, markay timaaddo labbiska, waxay jeclaysatay inay abuurto qaabkeeda u gaarka ah, waxay si fiican u taqaanay sida ay tahay inay isugu biiriso munaasabad kasta, had iyo jeer waxay ogaataa isbeddellada iyo xitaa waxay umuuqataa inay ogtahay inay saamayn gaar ah yeelan doonto. Waqtigaas, Instagram ayaa hadda u dhalatay sidii app si ay ula wadaagto sawirrada asxaabta iyo sida ay u noqon karto aaladda xayeysiinta oo aan la saadaalin karin. Laakiin Alexandra, waxay ahayd qof aragti dheer waxayna ogaatay in haddii ay ku xirto baloogeeda Instagram, saaxiibbadeed ay bilaabi karaan inay booqdaan boggeeda.
Sannadkii 2013 -kii balooggiisa "Pepa qurux badan" waxay horey u gaartay celcelis aad u badan oo booqashooyin bille ah, halkaas oo dharka iyo sumadaha alaabada ay u soo diraan alaabteeda illaa iyo inta ay dallacsiinayso, waxay ahayd isla waqtigaas Alexandra waxay ogaatay muhiimadda uu sawirkeeda hadda yeelan doono iyo mas'uuliyadda ay iyada ku dhacday, matalaya sumadaha kala duwan. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa waxay ahayd markii ay u samaysay sawirka astaanta kabaha, oo u sharadaysay iyada oo ah saamayn leh oo nuxurkeedu ahaa mid fudud, xarrago leh oo la awoodi karo. Guushu waxay ahayd in bil gudaheed bilawgii ololahan, shirkadan ay hore u saddex jibaartay iibkeeda.
Xaqiiqda madadaalada leh, maxaad ugu jeceshahay Pepa? Haddii aad tahay xayawaan jecel oo aad haysatay xayawaan rabaayad ah, waad ogtahay inaan dooranno magacyadooda sababta oo ah waxaan raadineynaa kan sida ugu fiican u matala oo u aqoonsada. Hagaag, xaalka Alexandra, Lovely Pepa wuxuu ahaa magaca xayawaankeeda, Bulldog Faransiis ah, waxaanan u malaynayaa taas, iyo sidoo kale eeygeeda, astaanteeda shaqsiyadeed inay ka soo ifbaxday isla qaabkii shaqsi ahaaneed, magac ay haysay sanado iyo maanta waa astaanta dharka oo la wada aqoonsan yahay.
Waxay yiraahdaan udugga ugu fiican wuxuu ku yimaadaa dhalooyin yaryar. In kasta oo, wax Alexandra ka dhigay mid adag sanado ayaa ahaa dhererkeeda. Dhab ahaantii, wareysiyo uu Saameeyaha ku sheegay in ay soo martay dhowr sano booc-boocsi dhinaca asxaabtiisa waxaad rabtaa inay ku maadeysteen dhererkiisa 1.60 mitir. Arrimuhu aad bay u sii murugsanaayeen markii sannadihii la soo dhaafay, Alexandra waxay ogaatay in helidda dhar cabbirkeedu ay sii adkaan doonto.
Halkaas ayay joogtay markii, in yar oo dheeraad ah oo ah ballaarinta oo ah astaan ​​shaqsiyeed, ay aqoonsatay in aysan kaligeed ahayn, oo ay tahay in gabdho badan ay la jaanqaadaan cabbirka dadka dhaadheer ka dibna ay maraan dharka dharka si ay u hagaajiyaan dharka. Markaa wuxuu ka fikiray sidii loo abuuri lahaa astaan ​​dhar oo loo dhan yahay oo ku habboon dadka gaagaaban: Ururinta Pepa ee Quruxda badan.
Qaabkiisa ayaa ku qeexa inuu yahay Style Street Street. Waxaan marqaati ka nahay in Alexandra Pereira aysan tan wax ka beddelin tan iyo markii la aasaasay waxayna had iyo jeer carrabka ku adkeyneysaa inaad si fiican u ekaan karto adigoo adeegsanaya dhar qallafsan qiime jabansi aad ula yaabto.
Hormuudka raaxada qaalisan caalamka:
Faafida ayaa shaki la’aan wax walba u rogtay, oo xitaa saamaysay adduunka moodada. Caadadu waxay joogtay guriga, iyo iibsashada dharka si aad u baxdo waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin safarka. Sidaa darteed haddii dukaamaysiga uu ahaa bilowga maalinta, waa inaad u baxdid qaab ahaan. Waxay ahayd markaa qaababka iyo raaxada ayaa xoogaa hoos u dhigay ilaaladoodii oo moodku soo jeestay, Qurux Badan.
Alexandra waxay ka mid ahayd saamayntii ugu horreysay ee ku dhiirratay inay aasaasto daboolka baseball -ka oo ah kaabis muhiim u ah hawl -maalmeedka, oo ay weheliso jaakado iyo kabaha canqowga. Sida laga soo xigtay iyada, xuduudaha la aasaasay ee koofiyaduhu ay yihiin oo keliya marka maalintii ay gabi ahaanba qoraxdu tahay, ama aad joogto xeebta, waa in xoogaa la jebiyo. Alexandra waxay ku tusaysaa muuqaalkeeda, halkaasoo ay waxoogaa ku dhex darto moodada isboortiga, oo ay ku jirto boorsada jeebka iyo boorsada dharka lagu xirto iyo koofiyaddeeda, taasoo ka dhigaysa inay u muuqato mid raaxo leh, dabacsan, iyo dhallinyarnimo.
Intaa waxaa dheer, xaqiiqo kale oo cajiib ah oo ku saabsan saamaynta iyo YouTuber ayaa ah inay ka qaybgashay bandhig -faneed Millennial oo ay soo qabanqaabisay Dolce & Gabanna, halkaas oo ay kula wadaagtay Sofie Richie, Presley Gerber iyo Kate Moss, oo ah arrin aysan waligeed ku malayn 2009 markii ay samaynaysay galitaannadii ugu horreeyay ee balooggaaga.
Muraayadaha indhaha iyo shakhsiyaddooda
Falanqaynta xoogaa shabakadaha saameeyahan, waxaan ogaanay in dhammaan dharka lagu taliyay, marna ha u oggolaan in alaab furaha muhiimka ah la dareemo… Haa! Muraayadaha Muraayadihiisa. Fiidiyow lagu baahiyay shabakadeeda, abuuraha Pepa jecel wuxuu na tusayaa qolkiisa: a armaajada socodka ku riyoon qof walba, laakiin xitaa ka sii gaar ah isaga ayaa leh taagan ee ururinta muraayadaha, halkaas oo ay jiraan qiyaastii in ka badan 50 galaas. Waali!.
Iyadu, waxay muhiim u tahay markay dooranayso muraayadeeda inay yihiin kuwo fudud oo ay ku darayaan gabi ahaanba wax kasta oo ay ku haysato armaajadeeda. Waa hagaag, laga yaabee inaad haysato mid ama mid kale oo leh qaab madadaalo leh, kaas oo loo isticmaalo sabab gaar ah, laakiin guud ahaan dhammaantood waxay xalliyaan qaab isku mid ah: Muraayadaha jir -madow ama tortoiseshell, oo leh muraayadaha XXL ballaariyay, iyo muraayadaha. bisad-il y balanbaalis.
Ugu cadcad? Muraayadaha muraayadaha oo leh hufnaan casaan ah iyo qaab balanbaalis ah, sida noo Pink Tuulada. Naqshadeeyaha sidoo kale, muraayadaha noocan ah, ee aan caadiga ahayn, waxaa adeegsada kuwa ku dhiirran. Laakiin ku dhiiran macnaha, in mar walba la yeesho xiisaha dusha sare, jebinta fikradaha qaldan, ee ogaanshaha aragtiyaha cusub. Buurta noocan ahi waxay u saamaxday inay ku qaadato maalin nasasho leh laakiin aan la dareemin. Intaa waxaa dheer, waxay u soo baxday inay tahay muraayado noocyo badan leh oo lagu dari karo codadka dharka laga bilaabo pastels diiran ilaa isla casaan casaanka ah.
Muraayado nooc kale ah oo aan ogaannay in saameeyahu jecel yahay waa: nooca madow bisad-il, aad ugu eg kuwayaga Madow Baasifigga. Shaki la'aan Alexandra aad bay ugu caddahay muhiimadda ay leedahay in la xidho kuwa 'Aasaaska Fudud'. Waxaan arki karnaa in muraayadahaani ay la socdaan wax walba! Iyo miyir -qabka, iyo qaab -dhismeedka xarrago leh ee ay wejigiisa keenaan waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee aan u rumaysanno qoraaga moodada ee aan ku arko muraayadahahan.
Shaki la'aan, Alexandra waxay dhiirri -gelin u ahayd gabdho badan oo doonaya inay qaabkeeda iyo fudaydkeeda u noqoto tixraac. Anaga, nuxurkeedu wuxuu naga buuxiyaa fikrado si aan u ogaano kunka qaab ee isku -jira muraayadaha iyo koofiyadaha. Iyo waliba sawiradiisa safarada iyo waaya -aragnimadu waxay ina tusayaan nolol riyo ah. Sideed ku heshay?